Baarlamaanka Archives - Page 2 of 6 - Sawirrotv
Magacyada Gudiga Doorashooyinka Madaxweynaha Soomaaliya oo Galabta la Shaaciyay (Akhriso)
January 24, 2017 – Kulankii xildhibaanada iyo gudoonka labada aqal ee baarlamanka federaalka Soomaaliya ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu soo doortay xildhibaano fulin doono xilka Guddiga Doorashooyinka Madaxweynaha. Kulankan oo ay soo xaadireen ku dhowaad 250 xildhibaan ayaa waxaa ajendaha looga hadlayey uu ahaa dejinta magacaabida guddiga doorashooyinka madaxweynaha. Tirada guddiga …
Qodobo Laga soo Saaray Kulankii Maanta ay Yeesheen Labada Aqal ee Baarlamaanka (Akhriso)
January 24, 2017 – Kulankii Maanta ay yeesheen labada aqal ee Baarlamanka federaalka Soomaaliya, kaasi oo ahaa kulankoodii ugu horeeyey ee ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa dhamaadkii laga soo saaray illaa lix qodob oo ku saabsan qaabka loo qabanayo doorashada Madaxweynaha Soomaaliya. Qodobada ay soo saareen Xildhibaanada labada aqal ee Baarlamaanka ayaa waxaa la …
Labada Aqal ee Baarlamaanka oo Maanta soo Saaraya Gudi Isku Dhaf ah oo Soo Diyaariya Doorashada Madaxweynaha (DHagayso)
January 24, 2017 – Waxaa maanta kulankoodii u horeeyay yeelanaya Xildhibaanada golaha Shacabka iyo kuwa Aqalka Sare oo ay kala hogaaminayaan mudane, Maxamed Sheekh Cusmaan(Jawaari) iyo Mudane, Cabdi Xaashi Cabdilaahi. Xildhibaanada ayaa waxa ay ka wada hadli doonaan arimo badan oo khuseeya doorashada Madaxweynaha Soomaaliya. Sidoo kale kulankan ayaa ah mid looga xoojinayo xiriirka ka …
Jawaari iyo ku Xigeenadiisa oo Maanta Kulan la Qaatay Gudiga Hirgelinta Doorashooyinka Dadban (VIDEO)
January 15, 2017 – Gudoonka Baarlamaanka Cusub ee federaalka ayaa Maanta Kulan la Qaatay Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Dadban ee dalka. Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane, Maxamed Sheekh Cusmaan “Jawaari”, Guddoomiye ku xigeenka koobaad Mudane C/weli Sheekh Ibraahim Muudeey, Guddoomiye ku xigeenka labaad Mudane Mahad Cabdalla Cawad oo uu wehliyo Xoghayaha guud ee Golaha Shacabka Mudane …
Mahad Cabdalla Cawad oo loo Doortay Xilka Gudoomiyaha Sadexaad ee Baarlamaanka Federaalka
January 12, 2017 – Waxaa iminka la soo gabo gaboobay tirinta codadka Doorashada Gudoonka labaad ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, waxaana goordhaw Xildhibaanada Baarlamaanka ay doorteen Gudoomiye ku xigeenka labaad ee Baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaan Mahad Cabdalla Cawad ayaa ku guuleestay Doorashada Gudoomiye kuxigeenka labaad ee Baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxaana uu helay codad gaaraya 169-cod iyadoo …
Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muudey oo ku Guulaystay Xilka Gudoomiye ku Xigeenka 1-waad ee Baalamaanka
January 12, 2017 – Waxaa dhawaan la soo gabagabeeyay tirinta codadka Doorashada Gudoomiye kuxigeenka Koowaad ee Baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxaana kursigan ku tartamayay labada Musharax ee kala ah Cabdiweli sheekh Ibraahim Muudey iyo Faarax sheekh C/Qaadir. Doorashada labadan xildhibaan oo aheyd mid aad u adag ayaa ugu dambeyn waxaa ku guuleestay Musharax Cabdiweli Ibraahim Muudey …
DEG-DEG: Doorashada Gudoomiye kuxigeenada Baarlamaanka oo Hadda ka Bilaabatay Xarunta Baarlamaanka
January 12, 2017 – Xarunta golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa hadda ka bilaabatay u codeynta Gudoomiye kuxigeenka koowaad Baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Doorashada Gudoomiye kuxigeenka Koowaad iyo kan labaad ee Baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo iminka ka socota Xarunta golaha Shacabka ayaa la rajaynayaa in doorashadaasi isla maanta la soo gabagabeeyo. Doorashada maanta oo ah …
Amniga Xarunta Doorashada ay ka Dhacayso ee Golaha Shacabka oo Maanta aad loo Adkeeyay
January 12, 2017 – Guud ahaan amniga Xarunta Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliyeed Magaalada Muqdisho ayaa maanta si ka duwan sidii shalay loo adkeeyay, iyadoo saaka halkaasi lagu arkay ciidamo aad u hubaysan iyo ciidamada Gaashaan ee ka tirsan kuwa Nabad Suggida qaranka. Xarunta Golaha Shacabka ayaa maanta waxaa lagu wadaa inay ka dhacdo …
DEG-DEG: JAWAARI oo Maanta Mar Labaad ku Guulaystay Xilka Gudoomiyaha Baarlamaanka Federaalka (VIDEO)
January 11, 2017 – Waxaa goordhaw la soo gaba gabeeyay tirinta codadka Xildhibaanada Baarlamaanka federaalka ee maanta dooranayay Gudoomiyaha cusub Baralamaanka 10-aad ee Soomaaliya. Doorashada gudoonka Baarlamaanka ayaa waxaa ku tartamayeen afar musharax, oo labo kamid ah ay ahaayeen kuwo aad u culus. Natiijada Doorashadani oo lagu dhawaaqay ayaa wareegii hore ee Doorashada waxaa ku …
DEG-DEG: Doorashadda Gudoomiyaha Baarlamaanka oo Hadda ka Bilaabatay Magaalada Muqdisho (SAWIRRO)
January 11, 2017 – Waxaa dhawaan xarunta Golaha shacabka ee magaalada Muqdisho ka bilaabatay tartanka Doorashada Guddooomiyaha Baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya. Ammaanka goobta ay doorashada ka socoto iyo guud ahaan Magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta si weyn loo adkeeyay amniga goobahaasi, iyadoo Doorashadani ay tahay mid lagu dooranayo Guddoomiyaha Baarlamaanka 10-aad ee dalka Soomaaliya. Musharaxiinta …